Ngaphezulu kwe-2,000 3 yabasebenzi bezokhenketho baseJamaica bagonywe kwiintsuku zokuqala ezi-XNUMX zokuqhutywa kogonyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Caribbean » Ngaphezulu kwe-2,000 3 yabasebenzi bezokhenketho baseJamaica bagonywe kwiintsuku zokuqala ezi-XNUMX zokuqhutywa kogonyo
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • Ukwakha kwakhona • Resorts • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
HM ENKOSI- Umphathiswa Wezokhenketho, Hon. U-Edmund Bartlett, (emi) uvakalisa umbulelo ongazenzisiyo kumanani abasebenzi bezokhenketho ngexesha labo lokujonga emva kokuthatha iyeza lokuzikhethela abazikhethele lona kwi-blitz Moon site ngolwe-Sihlanu, nge-3 Septemba 2021. Ubabulele ngokudlala indima yabo ekukhuseleni ukhenketho. icandelo, ngokuthatha isitofu sokugonya esisindisa ubomi.
Ngaphezulu kwama-2,000 30 abasebenzi bezokhenketho eJamaica abagonyiwe besebenzisa esinye sezitofu ezintathu zokugonya abazenzelweyo kwiindawo ezininzi ze-blitz eziququzelelwe liQela elitsha lokuGonya uKhenketho, kwiintsuku ezintathu zokuqala zemisebenzi ephambili. IQela eliSebenzayo, elasekelwa ukuququzelela ukugonywa kwabo bonke abasebenzi bezokhenketho kwisiqithi ngokubanzi, baququzelele uthotho lwee-blitzes zokugonya, eyokuqala yabanjwa nge-XNUMX ka-Agasti.
Ukhenketho lwaseJamaica kumgaqo oqinisekileyo wokugonywa kwe-COVID-19 kubasebenzi bezokhenketho.
UMphathiswa wezoKhenketho kunye noSihlalo weQela loMsebenzi wokuGonyelwa uKhenketho babekhona kwindawo yokugonya i-Moon Palace ukubulela amaqela kunye nabasebenzi.
Iindawo ezininzi zokugonya ii-blitz ziya kusekwa eNigril, e-Ocho Rios, e-Montego Bay nase-South Coast ngethemba lokugonya abantu abangama-600 ngosuku kwindawo nganye.
Ukulandela ugonyo lwabasebenzi abali-1,200 30 e-Pegasus Hotel nge-2 ka-Agasti, ngaphezulu kweentsuku ezimbini (nge-3-556 kaSeptemba) uSandals Negril wabona malunga nabasebenzi bezokhenketho abangama-3 bethatha izitofu abazikhethele zona, ngelixa baseMoon Palace eOcho Rios ngolwe-Sihlanu, Septemba 385. , bangama-320 abasebenzi abagonywayo. Nangona kunjalo, iMoon Palace yayine-blitz yangaphambili apho abasebenzi abangama-60 bafumana i-jab kwaye ukuza kuthi ga ngoku iipesenti ezingama-XNUMX zabasebenzi bayo bagonyiwe.
Jameyikha UMphathiswa wezoKhenketho, oHloniphekileyo. Edmund Bartlett, kunye noSihlalo we-Co IQela lokuGonyelwa uKhenketho, UClifton Reader, bebekwindawo yokugonyelwa iMoon Palace ukuze babone ukusebenza apho kunye nokubulela amaqela asebenzisanayo kubandakanya abongikazi kunye noogqirha abavela kwicandelo labucala ababandakanyekayo kule nkqubo.
Umphathiswa u-Bartlett uthe, "eli phulo libubambiswano phakathi koMphathiswa Wezokhenketho, iJamaica Hotel kunye noMbutho wabakhenkethi (JHTA), kunye nePrivate Sector Vaccine Initiative (PSVI) ukuqhuba ugonyo lwabasebenzi abali-170,000 beli shishini kuwo onke amacandelwana. kumacandelo. ”
Ngelixa evumayo ukuba lo yayingumyalelo omde, uMnu. Bartlett wayenethemba njengoko "sibona ukuzimisela kwabasebenzi ngoku njengoko kungqinwa kukudibana esikubonileyo kwezi ntsuku zintathu zidlulileyo oko kwaqala inkqubo."
Uthe ezinye iindawo ze-blitz ziza kusekwa eNigril, e-Ocho Rios, e-Montego Bay nase-South Coast ngethemba lokugonya abantu abangama-600 ngosuku kwindawo nganye. "Injongo ayikokunyanzelisa amaziko akhoyo ezempilo ukwenza le nkqubo yokugonya, ke oogqirha, abongikazi nawo onke amalungiselelo ezinto ezikhoyo banikezelwa sithi ngomanyano," utshilo.
UMphathiswa wenze isibheno kubasebenzi abakushishino lwezokhenketho, iintsapho zabo kunye nabahlobo abasondeleyo ukuba bafikelele kwezi ndawo zilungiselelwe ngokukodwa ezihambisa isitofu se-AstraZeneca, Pfizer kunye neJohnson & Johnson simahla. "Akukho mntu sijika naye," wagxininisa.
Ngeli xesha, uMnu. Reader okwanguMongameli we-JHTA nongumphathi we-Moon Palace, uthe iblitz yangaphambili yabasebenzi behotele “ihambe kakuhle kangangokuba ngeli xesha sithathe isigqibo sokuyivulela hayi kuphela iintsapho zabasebenzi bethu kodwa abathengisi bezobugcisa, abasebenza ngezothutho, abasebenzi basezilalini kunye nabo bakwezomtsalane. ” Abantu abafumana idosi yabo yokuqala kwiNyanga yeNyanga bayakumenywa babuyele kwidosi yabo yesibini.
Umgangatho wonke wehotele yephiko lasentshona uvulelwe indawo ye-blitz kwaye abathathi-nxaxheba bahamba kwisitya sokuhlambela esizenzekelayo ngaphambi kokungena kwindawo apho babephathwa khona kwintetho ebonakalayo kwintsholongwane ye-COVID-19 kunye nezitofu.
Umnumzana Reader uthe iihotele ezinkulu ezinesakhono sokwenza njalo, ziye zakhuthazwa ukuba zihlawule umrhumo wolawulo ukuqinisekisa ukuba nabani na oze khona akazukuhlawula kwanto ukuze agonywe. "Sifuna indawo yokusebenza ekhuselekileyo yabantu bethu kwaye ekuphela kwendlela yokwenza oko kukugonya," utshilo uMnu Reader.
Igosa le-Spa e-Moon Palace, u-Chevanise Williams uthe uyaqonda ukuba ukuthatha isitofu sokuthintela iyeza ayilonyango lwe-COVID-19 kodwa “ukuba uyayifumana le ntsholongwane, uyazi ukuba iimpawu azizukuba nzima, ngoko ke… kubalulekile ukuba ndiyithathe kuba kufuneka ndikhusele usapho lwam kunye nabantu abaza apha. ”